🕊️𝐏𝐁𝐙𝐓 : 𝐀𝐑𝐎𝐕𝐀𝐊𝐎 𝐍𝐘 𝐕𝐀𝐍𝐎 : 𝐅𝐈𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐕𝐎𝐃𝐈𝐓𝐀𝐓𝐀𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐎𝐓𝐒𝐘 🕊️
Notanterahana ny 12 may 2022 ny hetsika fampahafantarana sy fanamafisana ny fiarovana ny karazana Vano antsoina hoe « Fiandrivoditatatra ». Nanatrika izany ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-Tsiansa, ny Pr. ASSOUMACOU Elia Béatrice sy ireo Tale Jeneraly ary Tale eo anivon’ny Ministera.
Vorona zanatany efa tena vitsy an’isa eto Madagasikara ny Fiandrivoditatatra Fotsy (Ardeola idea), mpifindra monina ary atahorana ho lany tamingana ka izany no antony hiarovana azy. Latsaky ny 1500 isa sisa izy ireo ankehitriny. Fampahafantarana momba io karazana vano fotsy io, fanentanana eny amin’ny fokontany sy sekoly ary famerenana ny toeram-ponenany no atao amin’izany fiarovana izany.
Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin’ny tetikasa “COKETES”, tetikasam-panjakana eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Tontolo iananana sy ny Fandrosoana Lovain-jafy sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa, isan’ireo ny Valanjavaboahary Tsimbazaza na PBZT.
✅Miara-mientana ny mpikaroka, ny mpampianatra, mpandraharaha ary ireo mpianatra amin’izany hetsika fiarovana ny Vano izany. Nofaranana tamin’ny zaha vorona amin’ny alalan’ny masolavitra (Bird watching) ny hetsika.